၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ – Agri Digit News
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ
Posted on Author adminComments Off on ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန် က Web Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနား သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ ၊ ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ (FAO) မှ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Ms. Xiaojie Fan နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အကောင် အထည်ဖော် စီမံကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ က သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများမှ Zoom Application ဖြင့်တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ က ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားမိန့်ခွန်း ပြောကြားရာ၌ မိမိတို့ FAO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းမှာ လယ်ယာကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း တိုးတက်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှား ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ကြ ပါ ကြောင်း။ သို့သော်လည်း တစ်ဖက်မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊အဝလွန်မှု၊ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှု၊ ဇီဝမျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှု ကွင်းဆက် အတွင်းက လုပ်သားများရဲ့ ဘဝလုံခြုံရေး အားနည်းမှု၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကြောင့် အစားအစာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကို ထိခိုက်မှု၊ အစားအစာ စနစ် (Food System) အပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်စေမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေလျက် ရှိပါကြောင်း ။
စားနပ်ရိက္ခာ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ (၂)ဘီလီယံခန့်ဟာ အာဟာရ ပြည့်ဝပြီး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့ အစားအစာများကို လုံလောက်စွာ မရရှိကြကြောင်း၊ နိုင်ငံ(၅၅)ခုက ကမ္ဘာ့ပြည်သူ (၁၃၅)သန်းဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ငတ်မွတ်မှုကို ခံစား နေရပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသူ အရေအတွက်(၂)ဆ တိုးလာနိုင်ကြောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊အာဟာရနှင့် အသက်မွေးမှု အထောက်အပံ့များ အရေးပေါ် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ကြီးက ထုတ်ပြန် ထားပါကြောင်း။
တစ်ဖက်တွင်လည်း ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာ (၂၀၅၀) ပြည့်နှစ်မှာ (၁၀)ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိ မည် ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ ယင်းအခြေအနေအရ စားနပ်ရိက္ခာ လိုအပ်ချက် သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ အစားအစာစနစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်မှု မရှိခဲ့ရင် အာဟာရ ပြည့်ဝ သည့် စားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်စွာ မရရှိမှုနဲ့ အာဟာရမပြည့်ဝမှု တွေကို ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကြီးကြီးမားမား ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါကြောင်း။
လူသားများ အသက်ရှင်ကျန်းမာရေးအတွက် အာဟာရပြည့်ဝမှုဟာ အဓိကဖြစ် ပါကြောင်း ။ အာဟာရပြည့်စုံစွာ ရရှိရန် သားငါး၊ သီးနှံအမည်မျိုးစုံ စားသုံးဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း ။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာ့လူသားများ၏ စားသောက်သည့် အမူအကျင့်နှင့် အစားအသောက် ပုံစံများ မှာ သိသာထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲ လာခဲ့ကြပါကြောင်း။ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သည့် အစားအစာများ နှင့် နေထိုင်မှု အမူအကျင့်များကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနဲ့ ဆင်းရဲသည့် နိုင်ငံများ မှာသာ မက ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများမှာပါ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါကြောင်း။ တဖက်မှာလည်း သီးနှံ သားငါး ထုတ်လုပ်မှုမှာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ရမှု၊ ဓာတ်မြေဩဇာ ပိုးသတ်ဆေး စသည့် ဓာတုပစ္စည်းများ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုတို့ကလည်း စားသုံး သူများ ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေလျက်ရှိပါကြောင်း။
ထို့ပြင် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှု၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲမှုတို့ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး က ဆယ်စုနှစ်ကျော် တွေ့ကြုံဖြတ်သန်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။ သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းလာမှု၊ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ ဆုတ်ယုတ်လာမှု တို့ကြောင့် စားသုံး သီးနှံ၊ သားငါးများ၌ ရောဂါဘယ မျိုးစုံ ကျရောက်ပြီး ယင်းတို့ကို ဓာတုဆေးဝါးများ သုံးစွဲ နှိမ်နင်း မှုကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ၏ ဘေးကင်းမှု၊ အာဟာရပြည့်ဝမှုတို့အပေါ် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ ကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေကြရပါကြောင်း။ ယင်းအချက်များက မိမိတို့၏ အစားအစာနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ တွန်းအားပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
နှစ်စဉ်လိုလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သည့် ရေကြီး၊ မိုးခေါင်၊ မြေပြို၊ ပိုးမွှား ကျရောက် မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရသော အခြေအနေမှနေ၍ ယခုနှစ်၌ ကမ္ဘာ့လူသား များ၏ အသက် ကို ပါ ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ်ပြုလာသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး ကိုလည်း နိုင်ငံတိုင်း ရင်ဆိုင် တွန်းလှန်နေကြရတာ အားလုံး အသိပင်ဖြစ်ပါကြောင်း။
အဆိုပါအခြေအနေတွင် နိုင်ငံတိုင်းက ချက်ခြင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ၊ ရေတို ရေရှည် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေနှင့် အညီ ချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ နိုင်ငံအစိုးရများက ထိခိုက်နစ်နာသူ ပြည်သူ များ အတွက် အရေးပေါ် ရိက္ခာ အထောက်အပံ့များ၊ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု မလျော့ကျရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ၊ ရေရှည် တည်တံ့သော အစားအစာ စနစ်အတွက် လိုအပ်သည့် မူဝါဒနှင့် အထောက် အကူပြု ဥပဒေများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ရရှိရေးများကို “ဝန်နဲ့အား လေးနဲ့မြား” ဆိုသကဲ့သို့ မိမိတို့၏ စွမ်းဆောင် နိုင်မှုပေါ် အခြေခံပြီး ချမှတ် ဆောင်ရွက် သွားရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယခုကဲ့သို့ အကြပ်အတည်းများစွာ ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် ကာလ၌ မိမိတို့၏ အန္တိမ ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သော ငတ်မွတ်မနှင့် အာဟာရ မပြည့်ဝမှု ကင်းစင်ရေး ပန်းတိုင်မှ သွေဖည် မသွား စေရန် ကြိုးပမ်းကြရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုးပွားလာမည့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အတွက်၊ ကမ္ဘာမြေကြီး ရေရှည်တည်တံ့ သာယာဝပြောရန် အတွက် မိမိတို့အပါအဝင် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာ သားများအားလုံး အတူတကွလက်တွဲပြီး အာဟာရပြည့်ဝသည့် သီးနှံအမယ်စုံ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး ကြိုးပမ်းကြခြင်း အားဖြင့် တည်တံ့ခိုင်မာသော အစားအစာစနစ်ကို ထူထောင် ကြဖို့ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ထို့ကြောင့်လည်း ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ကြီးက ယခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ် ရိက္ခာနေ့ ဆောင်ပုဒ်ကို “အာဟာရတိုး၊ လူ့အကျိုးကို၊ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်၊တို့ရည်သန်၍၊ ဧကန် ဖွင့်လှစ်၊ ကမ္ဘာသစ်” (Grow, nourish, sustain. Together. Our actions are our future.)”ဟု သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်ထားပါကြောင်း အသိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်ကြောင်း။
မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေအခြေခံ နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ပြည်သူ များ၏ နေ့စဉ်စားရေးအတွက် အာဟာရပြည့်ဝပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသည့် စားနပ် ရိက္ခာများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ၊ နှစ်တိုနှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး အာဟာရပြည့်ဝ သော စားနပ်ရိက္ခာများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ စုံလင်လှသော သီးနှံများ ထုတ်လုပ်ရေး သည်လည်း အရေးကြီးသည့်အတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကြွယ်ဝသည့်မြန်မာ့ဒေသ မျိုးများဖြင့် မျိုးစပ် မွေးမြူခြင်း အပါအဝင် အရည်အသွေးကောင်း မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရယူစိုက်ပျိုး နိုင်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အမျိုးသားမျိုးစေ့မူဝါဒ ချမှတ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း။
ထို့အပြင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး အာဟာရ ပြည့်ဝသည့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ ရေရှည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်လျက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ (Good Agricultural Practice-GAP) နှင့် Organic နည်းစနစ်များ ထွန်းကားလာစေရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာတွင် GAP Guidelines ကို အာဆီယံ GAP နှင့်အညီ ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သီးနှံအမယ်အသစ်များ တိုးတက်သတ်မှတ်နိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း။
အလားတူ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေး ကျင့်စဉ် (Good Animal Husbandry Practice- GAHP)နှင့် ကောင်းမွန်သော ရေသတ္တဝါ မွေးမြူရေးကျင့်စဉ် (Good Aquaculture Practice- GAqP)များနှင့် အညီ မွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း။
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီး လတ်ဆတ်၍အဟာရပြည့်ဝသော အမယ်စုံ ဟင်းသီးဟင်း ရွက်များကို အချိန်မရွေး စားသုံးနိုင်စေရန် နှင့် ပိုလျှံသည်များကိုရောင်းချ၍ အပိုဝင်ငွေ များရရှိစေရန်၊ ဒေသစျေးကွက်တွင် အဟာရပြည့်ဝသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရောင်းချ နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် အိမ်ခြံဝန်းအတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက် တပိုင်တနိုင် စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်း (Home Gardening) နှင့် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းများတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းများ (School Gardening) အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာမှာ အိမ်ထောင်စု (၉၇၁)စုအတွက် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် ကျေးရွာ အုပ်စု(၂)ခုစီ ရွေးချယ် ပြီး သရုပ်ပြကွက် (၀.၅)ဧကစီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း။ တစ်ဖက်မှာလည်း ရာသီဥတုဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲမှုကြောင့် သီးနှံများ ထိခိုက် ပျက်စီးရာမှာ လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူလယ်သမားများ ပြန်လည်အစားထိုး စိုက်ပျိုးနိုင် ရေးအတွက် အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေမှ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ပေးလျက်ရှိရာ လက်ရှိအစိုးရ ကာလအတွင်း ကျပ်(၂၃.၆၈)ဘီလီယံနဲ့ မျိုးစပါးတင်းပေါင်း (၂၄၆၅၂)တင်း ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း။
ပြည်သူများအနေဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအာမခံချက်ရှိသော စားသောက် ကုန်များ စားသောက်လာနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်လျက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး အာဟာရ ပြည့်ဝသည့် တန်ဖိုးမြှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်းများကို တစ်နိုင်ငံ လုံး အတိုင်းအတာ အားဖြင့် လက်ရှိ အစိုးရကာလ အတွင်း (၅၅၂) ကြိမ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သင်တန်းသား (၁၁၈၅၂)ဦး ကို ပို့ချခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။ ၎င်းအပြင် ဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုအတွက် ဓါတုနှင့် အဏု ဇီဝ ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှုအကြိမ်(၁၈၇၁၁) ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပါကြောင်း။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ် ကြောင့် အသွား အလာ ကန့်သတ်မှုတွေ၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ကြန့်ကြာမှုတွေရဲ့ အကျိုးဆက် အဖြစ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်သူများအပါအဝင် ကဏ္ဍအသီးသီးက ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ရပ်တံ့မသွားအောင် နိုင်ငံတော်က စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ပေး လျက် ရှိပါကြောင်း။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ထုတ်လုပ် သူများ၊ လယ်ယာလုပ်သားများအတွင်း ရောဂါမပြန့်ပွားရေးအတွက် လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အသိပညာပေးခြင်း၊ သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်မှုကို မထိခိုက် စေရေး အတွက် COVID-19 ၏ စီးပွားရေးအပေါ် ထိခိုက်မှု သက်သာရေး စီမံချက် (COVID-19 Economic Relief Plan- CERP) လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မိုးစပါး မျိုးစေ့ထုတ် ဧက(၁)သိန်းအတွက် သွင်းအားစု များ ရရှိရေး တောင်သူများအား ထောက်ပံ့ ကူညီ ခြင်း၊ ကျေးလက်နေ မိသားစုများအတွက် ကျေးရွာ (၁၇၁၀)တွင် Village Revolving Fund Project ကျေးရွာ မတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ Cash for Work စီမံကိန်း များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အသေးစား၊ အလတ်စား မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အား မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ သွင်းအားစုများ ရရှိရေး ထောက်ပံ့ ငွေ/ချေးငွေ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ရေချိုငါးလုပ်ကိုင်သူများ အတွက် ငါးသားပေါက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ မွေးမြူ ထုတ်လုပ်သူ (၁၀၀၀၀)ဦး အား သင်တန်း များ ပို့ချပေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး(၇)ခုရှိ မိုးစပါး ဧက (၂၀၀၀)တွင် ကောက်စိုက်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိ ယာ များ အရစ်ကျရောင်းချပေးရန် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်ဝင် အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်း ပညာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဘဏ္ဍာငွေကျပ် (၉၂.၆၁)ဘီလီယံ ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်းအသိပေး ပြောကြား လိုပါကြောင်း။
အချုပ်အားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ အဓိက တာဝန်ကြီး သုံးရပ်ဖြစ်သော စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး နှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ က ချမှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန် ချက်များနဲ့အညီ (FAO)အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ယခုနှစ် ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာနေ့ ဆောင်ပုဒ်နှင့် အညီ မိမိတို့၏ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် မှုနှင့် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများသည် ကျေးလက်နေပြည်သူ များအပါအဝင် ပြည်သူများ အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး အာဟာရပြည့်ဝသော စားနပ် ရိက္ခာများ လုံလောက် ပိုလျှံစွာ စားသုံးနိုင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးသို့ မျှဝေနိုင်ခြင်း အကျိုး တရားများကြောင့် စည်ပင် သာယာ ဝပြောသော အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်မှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပံ့ပိုးပေး နိုင်မည်ဟု အလေးအနက် ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားရင်း ယနေ့ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ စားနပ် ရိက္ခာနေ့ အခမ်းအနား၏ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အာဟာရ ပြည့်ဝသော သီးနှံမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်၍ ကမ္ဘာကြီး ရေရှည်တည်တံ့ပြီး သာယာဝပြော စည်ပင်လာအောင် လက်တွဲ ကြိုးပမ်းကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်း ဆန္ဒပြုလိုက် ရပါ ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ (FAO) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၏ သဝဏ်လွှာကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ FAO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Xiaojie Fan က ဖတ်ကြားသည်။
ထို့နောက် ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ (FAO)ရုံးက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့စားနပ် ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဗီဒီယိုကိုပြသသည်။
အခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ရာသီဥတုဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်(AAPDRR)စာအုပ် အား တရားဝင်မိတ်ဆက် ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ FAO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Xiaojie Fan က ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပြီး FAO-Emergency and Rehabilitation Coordinator ဖြစ်သူ Mr. Reda Lebtahi က လုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြ သည်။
ထို့နောက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော် က စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျှော့ချရေး လုပ်ငန်း စီမံချက် (AAPDRR)စာအုပ် အား တရားဝင် မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ စားနပ် ရိက္ခာ နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Organic နည်းပညာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) သင်တန်းဖွင့်လှစ်
Organic နည်းပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)ကို ဇွန်လ ၃ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ထုံးဘိုရိတ်သိမ်း ချိန်လွန် နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ထိ ၅ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့သည်။
မြမျိုးသန့်မျိုးစေ့သမဝါယမအသင်း က မိုးစပါးမျိုးသန့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြောင်းမြမြို့နယ်သမဝါယမ ဦးစီးဌာန နှင့် မြောင်းမြမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ (၁၀)ရွာတို့မှ တောင်သူအသင်းသားများဖြင့် မြမျိုးသန့်မျိုးစေ့ထုတ်သမဝါယမအသင်း ကို ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သမဝါယမအသင်း က မျိုးကောင်း မျိုးသန့်စပါးများ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် တစ်ဧကလျှင် ငွေကျပ် (၃၀၀၀၀၀) နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပြီး အသင်းသား များကလည်း ပြန်ဆပ်ချိန်တွင် အချိန်မီ အပြေအကြေပေးဆပ်ကြကြောင်း၊ ယခုနှစ် မိုးစပါးရာသီတွင် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ဆင်းသုခ၊ ပေါ်ဆန်းရင်၊ ဧရာမင်း မျိုးသန့် မျိုးစေ့ထုတ် စိုက်ဧက (၂၅၂) ဧကကို စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် သင်တန်း/အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
လယ်ယာကဏ္ဍအရှိန်မြှင့်တင်ရေး COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှု အကျိုးကျေးဇူး